Posted by ဆိုးသွမ်း at 9:38 PM
၁၉.၁၂.၂၀၀၇ တုန်းက ကျွန်တော်တို့ အမှတ်စဉ် ( ၄၆ ) ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း ကျောင်းဆင်း ခဲ့တာ ( ၄ ) နှစ်ပြည့် အထိန်းအမှတ် အဖြစ်ရော ၊ ဗိုလ်ကြီး အဖြစ် ရာထူး အဆင့်တိုးမြင့်ခြင်း အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် မြန်မာနှင့် ရုရှား နိင်ငံတွင် ပညာသင်ကြားနေသော သူငယ်ချင်း အားလုံးမှာ စုပေါင်း၍
၁. ဓမ္မစကုမုဒြာ ၊ ဓမ္မစကြာင်္ ဗုဒရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီး - ၄၆သိန်း
၂. ဓမ္မစကုမုဒြာ၊ဓမ္မစကြာင်္ ဗုဒရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီး(ကျောင်းဆောင်) - သိန်း၅၀
၃. ဒိုးပင် မိဘမဲ့ကလေးကျောင်း - ၅သိန်း
၄. မျက်မမြင်ကျောင်း (ရေသန့်စက်) - ၁၀သိန်း
၅. ဘိုးဘွားရိပ်သာ - ၅သိန်း
၆. ရေစက်ချ နှင့် အလှူတော် မင်္ဂလာ - ၁၄သိန်း
တို့ကို အလှူဒါန ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဓတ်ပုံများ ဒီနေ့မှ ရ၍ ဖော်ပြနိင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အလှူငွေ စုစုပေါင်းမှာ ကျပ်ပေါင်း ( ၁၃၀၀၀၀၀၀ ) ဖြစ်ပါသည်။
ရရှိသော ကုသိုလ် ကောင်းမှု အစုစုအား လက်ရှိ မြန်မာနိင်ငံ အနှံအပြား အရပ်ဒေသ အသီးသီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော သူငယ်ချင်းများနှင့် တိုင်းပြည်အတွက် အသက်စွန့်ခဲ့သော သူငယ်ချင်းများ ရောက်ရာ ၊ ကြားရာ အရပ်မှ သာဓုခေါ်နိင်ကြပါစေ။ တိုင်းပြည်၏ အမျိုးဘာသာ ၊ သာသနာ နှင့် ပြည်သူ့ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်ကို အမှန်တရားဘက်မှ ရဲဝင့်စွာ ရပ်တည်နိင်သော “နောင်တစ်ခေတ်၏ အောင်စစ်သည်တော် ” များ ဖြစ်ကြပါစေ လို့ ဆုတောင်းရင်း
ခလရ ( ၄၅ ) ကွတ်ခိုင် ၊ အရှေ့မြောက်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် ၊ လားရှိုးမြို့။
မောင်လေးရေ သာဓုခေါ်သွားပါတယ်နော်... အလှူရေစက် လက်နဲ့မကွာ ဆိုသလို နောင်မှာလဲ ဒီထက်မက လှူနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကွယ်...
ခမရ ( ၃၃၉ ) ၊ အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် ၊ လှိုင်းဘွဲ့မြို ။
နောင်တော်များ အားလုံး ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ
သာဓု ခေါ်ပါတယ် ခင်ဗျာ ။
တိုင်းပြည်၏ အမျိုးဘာသာ ၊ သာသနာ နှင့် ပြည်သူ့ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်ကို အမှန်တရားဘက်မှ ရဲဝင့်စွာ ရပ်တည်နိင်သော “နောင်တစ်ခေတ်၏ အောင်စစ်သည်တော် ” များ ဖြစ်ကြပါစေ လို့ ဆုတောင်း
သာဓု သာဓု သာဓု :)
လှူလိုက်ကြတဲ့ ငွေပမာဏကတော့ တကယ်ကို အားရစရာပါပဲဗျာ။ အဲဒီအလှူအတွက် လှိုက်လှဲစွာ သာဓုခေါ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တာဝန်ကျခဲ့သော( ၇ )
စာပန်းချီ အမှတ် ( ၃ )
ကျွန်တော်တာဝန်ကျခဲ့သော( ၆ )
အဖြူရောင်မာယာနှင့် ကျွန်မ၏ အခန်းငယ်
ကျွန်တော်တာဝန်ကျခဲ့သော( ၅ )
ကျွန်တော်တာဝန်ကျခဲ့သော( ၄ )
( ၆၃ ) နှစ်မြောက် တပ်မတော်နေ့
ကျွန်တော်တာဝန်ကျခဲ့သော( ၃ )
ကျွန်တော်တာဝန်ကျခဲ့သော( ၂ )
ကျွန်တော် ရူးသွပ်သော ဘဝ